नेको इन्स्योरेन्सको कुल बीमाशुल्क आर्जन २ अर्ब २४ करोड, बीमा कोष कति ? « Artha Path
नेको इन्स्योरेन्सको कुल बीमाशुल्क आर्जन २ अर्ब २४ करोड, बीमा कोष कति ?
काठमाडौं । नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड चालु आर्थिक वर्षको तेस्रा त्रैमाससम्मको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । सार्वजनिक विवरण अनुसार कम्पनीले २.३६ प्रतिशतले घटेर ३४ करोड २६ लाख ४० हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोहि अवधि कम्पनीले ३५ करोड ९ लाख २२ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनाको अवधिमा कम्पनीको कुल बीमा शूल्क १३.६२ प्रतिशतले बढेर २ अर्ब २४ करोड ११ लाख रुपैयाँ रहेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले १ अर्ब ९७ करोड २४ हजार रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क रहेको छ ।
चैत मसान्तसम्मको अवधिमा कम्पनीको कुल दाबी भुक्तानी ९.७४ प्रतिशतले बढेर ८९ करोड ८० लाख रुपैयाँ रहेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोहि अवधिमा कुल दाबी भुक्तानी ८१ करोड ८३ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
समिक्षा अवधिमा कम्पनी जगेडा कोष ८.८० प्रतिशतले घटेर ६२ करोड २२ लाख ५१ हजार रुपैयाँ, चुक्तापूँजी १५.५० प्रतिशतले बढेर १ अर्ब ५२ करोड १६ लाख ३४ हजार रुपैयाँ, बीमा कोष २६.१६ प्रतिशतले बढेर १ अर्ब २७ करोड ७ लाख ९ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।
यस अवधिमा कम्पनीकाने प्रतिशेयर आम्दानी ३० रुपैयाँ ०२ पैसा र प्रतिशेयर नेटवर्थ २३० रुपैयाँ ०५ पैसा रहेको छ ।